Ihe omumu ohuru nke 2019 na Hormone Hormone Hexarelin
Peptide Hexarelin bụ hormone nke na-eto eto nke a na-akpọkarị Examorelin. Ọgwụ a bụ ụlọ nzukọ nzuzo ma ọ bụ GHSR nke homonụ uto. Hexarelin na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka GHRP-6, mana ekwuru na ọ ga-akpa ike karịa na ọ na-akpali mmepụta nke homonụ uto na ahụ gị. Nnyocha dị iche iche na-egosikwa na Hexarelin bụ GHRH kachasị ike dị na ahịa. Agbanyeghị, nsonaazụ ya nwere ike ọ gaghị abụ otu ihe n'ihi na ahụ mmadụ dị iche, mana ọ bụrụ na ị were usoro onyonyo Hexarelin ziri ezi wee rapara na ntuziaka dọkịta, ị ga-ejide n'aka na ị nwere nnukwu ahụmịhe. Na Ebe Hexarelin bụkwa ihe dị mkpa ịtụle mgbe ịzụrụ ọgwụ a. Nwere ike zụta Hexarelin n'ịntanetị site na weebụsaịtị anyị.
Hexarelin (140703-51-1) nke mejupụtara amino acid nke, mgbe a na-enye gị usoro ahụ gị, ha na-ebute gitu pituitary iji mepụta ogo ma ọ bụ na-eto eto nke homonụ uto. Ka ọ dị ugbu a, amatabeghị etu ọgwụ ọgwụ si arụ ọrụ otu oge ka agbanye n'ime usoro ahụ gị, ọkachasị ma e jiri ya tụnyere GHRP-6. E wezụga nke ahụ, enwere ihe akaebe zuru oke iji gosipụta na peptide Hexarelin bụ ike GH nwere ike ma na-ebute nsonaazụ ọma mgbe ejiri ya n'ụzọ ziri ezi.
N'aka nke ọzọ, data sayensi na akụkọ na-egosikwa na ojiji nke peptide Hexarelin mụbaa ogo prolactin na cortisol na ahụ gị karịa ọgwụ ọgwụ hormone ndị ọzọ na-eto eto n'ahịa taa. Ọkwa dị mma nke prolactin na sistemụ ahụ gị nwere ike ọ gaghị adị oke dị ka ọ nwere ike ịbụ mgbe ị na-ewere ọgwụ ndị na-arịa ọrịa anabolic. Otú ọ dị, ọgwụ a agaghị eme ka ọkwa Ghrelin dị na usoro ahụ gị dị ka ọ dị mgbe ị na-eji GHRP, ọ bụ ezie na ọ nwere otu ihe ahụ mejupụtara na Hexarelin.
Nnyocha egosila na Hexarelin so na ndị na-eto ngwa ngwa na-eto ngwa ngwa dị na ahịa. Otú ọ dị, ọgwụ ahụ na-akwụsị ịrụ ọrụ mgbe oge ụfọdụ ojiji. Dịka, homonụ uto gị kwesịrị ịbawanye ngwa ngwa n'ime izu anọ mbụ nke usoro onunu ogwu. Ọ bụ ezie na okirikiri ahụ nwere ike ịdị ogologo karịa na ndụmọdụ dọkịta gị, ọmụmụ ihe na-egosi na enwere obere uru maka ịnata Hexarelin maka izu 16. Ikwesiri ị theụ ọgwụ ahụ maka ihe dịka 8 ruo izu 12 wee were nkwụsịtụ ihe dị ka izu isii. Ojiji nke Hexarelin anaghị egbochi mmepụta okike nke homonụ uto site na pituitary glands dịka ọ bụ ikpe mgbe ị na-eji mgbakwunye testosterone.
Dịka ọgwụ ọ bụla ọzọ, peptide Hexarelin nwere ike ikpughe gị ụfọdụ nsonaazụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịfere ma ọ bụ jụ ịgbaso usoro ọgwụgwọ. Fọdụ n'ime mmetụta ndị a na-ahụkarị gụnyere;
A na-eji usoro ọgwụgwọ ọgwụ eme ihe site na ogwu ogwu. Hexarelin peptide dị n'ụdị ntụ nke a ga-akwadebe site na ịtinye ya na mmiri bacteria. Hexarelin (140703-51-1) ezigbo usoro onunu ogwu bu ihe dika 200mg kwa ubochi ma gha aru oru nke oma. Otú ọ dị, dabere na ọnọdụ gị ma ọ bụ ike ahụ gị, dọkịta gị nwere ike ime ka usoro ọgwụgwọ Hexarelin dịkwuo ihe dị ka 400mgs kwa ụbọchị. Data sitere na ọmụmụ nke ndị ọkachamara ahụike dị iche iche na-egosi na uru ya bụ otu, ọbụlagodi ma ị were 200mgs kwa ụbọchị. Ya mere, ị moreụkwuo usoro ọgwụgwọ apụtaghị na ị ga-enwe uru ọ bụla. Hexarelin tojupụtara na-enyekwa ihe kacha mma Hexarelin nwere.
Imirikiti nke ọgwụ GH dị na ntanetị, ị nwere ike ịme usoro gị mgbe niile site na nkasi obi nke ụlọ gị. Anyị bụ ndị na-eduga Hexarelin soplaya na mpaghara. Anyị na-enyefe ndị mmadụ oge gafee ụwa. Ebe nrụọrụ weebụ anyị bụ enyi na enyi, yabụ ị nwere ike ịbugharị ngwa ngwa site n'otu ngwaahịa gaa na nke ọzọ site na iji ekwentị gị, mbadamba ma ọ bụ desktọọpụ. Otú ọ dị, anyị na-adụ ndị ahịa ọdụ mgbe niile ka ha kpachara anya mgbe ị na-ahọrọ ezigbo ndị na-eweta ngwaahịa Hexarelin. Emela iwu site na isi Hexarelin ọ bụla ị hụrụ. Mee nyocha gị ma họrọ onye na-ebubata ngwaahịa Hexarelin a ma ama.
N'aka nke ọzọ, gbaa mbọ hụ na ị ghọtara ihe iwu n'obodo gị na-ekwu gbasara ịzụrụ, mbubata, ma ọ bụ ịnweta peptide Hexarelin. Anyị bụ ụlọ ọrụ na-asọpụrụ iwu, anyị agaghịkwa achọ itinye ndị ahịa anyị na-eguzosi ike n'ihe na nsogbu na gọọmentị ha. Iji maa atụ, na US, ịzụta Hexarelin n'ịntanetị bụ naanị iwu mgbe ị na-eji ya maka ebumnuche nyocha. Agbanyeghị, ọ bụ iwu na-akwadoghị mgbe ịzụrụ Hexarelin maka ojiji nkeonwe. Gbaa mbọ hụ na ị na-enweta ọzụzụ maka ọgwụ Hexarelin tupu ịmalite ị takingụ ọgwụ.
Na nchịkọta, Hexarelin hormone na-eto eto bụ otu n'ime peptides kachasị ike na ụlọ ọrụ ahụ. Otú ọ dị, ọ na-efu obere karịa HGH nkịtị ma na-enye onye ọrụ ahụ ezigbo uru. Ugbu a, ọ dịghị ọtụtụ data gbasara ọgwụ ahụ, mana obere ọmụmụ ihe na-egosi na Hexarelin ntụ ntụ anapụta nsonaazụ ọma. Jide n'aka na ị ga-enweta ọgwụ ahụ site na isi iyi Hexarelin a tụkwasịrị obi maka nsonaazụ kacha mma. Were injections Hexarelin ziri ezi ma debe ntuziaka usoro onunu ogwu. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla agwa dọkịta gị n'oge.